5G, teknụzụ nkwukọrịta nke ọgbọ nke ise bụ ọgbọ ọhụrụ nke teknụzụ nkwukọrịta mkpanaka brọdbandị nwere njirimara nke oke ọsọ, obere oge na nnukwu njikọ. Ọ bụ akụrụngwa netwọk iji ghọta igwe na ihe jikọrọ ya.
Ntaneti nke ihe bu ihe nrite nke 5G. Isi ike nke 5G abụghị naanị ịrị elu nke ndị na-azụ ahịa maka netwọkụ ngwa ngwa, kamakwa mmụba nke ngwaọrụ netwọkụ na gburugburu ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ndị ọrụ a na-adabere na ngwaọrụ ịkparịta ụka n'tontanet iji nakọta ma nyochaa data, mee ka usoro azụmahịa dịkwuo irè, melite arụpụta, ma na-emeziwanye ngwaahịa na ọrụ. A na-atụ anya na 5G ga-enyere ndị azụmaahịa aka ijikwa ọnụ ọgụgụ na-abawanye ụba nke ozi sitere na ofntanetị nke ihe, ma melite ozi nso nso achọrọ maka ọrụ dị oke mkpa dị ka robot nyere aka n'ịwa ahụ ma ọ bụ ịkwọ ụgbọ ala.
Circulator na onye na-ekewapụta ihe bụ otu ngwaọrụ dị mkpa nke ọdụ 5G. Usoro nkwukọrịta nke ekwentị niile na-ejikọkarị akụrụngwa nkwukọrịta mkpanaka, sistemụ mkparịta ụka nkwukọrịta mkpanaka yana ngwaahịa na nkwukọrịta mkpanaka. Isi ọdụ bụ nke akụrụngwa nke nkwukọrịta ekwentị. A na-ejikọkarị usoro ọdụ ọdụ ihe nke RF n'ihu, njedebe transceiver na onye isi njikwa. Ihe njedebe RF bụ ọrụ maka nzacha na iche iche, mgbazinye ọdụ ọdụ bụ maka ịnata mgbaàmà, izipu, ịbawanyewanye na mbenata, na onye na-ahụ maka ọdụ ọrụ bụ maka nyocha akara, nhazi na njikwa ọdụ ụgbọ. Na netwọọdụ ịnweta ikuku, a na-ejikarị mgbasa ozi iji wepụta mgbaàmà mmepụta na mgbaàmà ntinye nke antenna ntọala. Maka ngwa a kapịrị ọnụ, onye mgbasa ahụ nwere ike iji ngwaọrụ ndị ọzọ rụzuo ọrụ ndị a:
1. Ọ ga-eji dị ka poolu nkịtị;
2. Na Nchikota na BPF na ngwa ngwa attenuation, ọ na-eji na-efegharị kewara circuit;
3. Ejikọtara onye na-emechi njedebe na mpụga nke onye na-ekesa ihe dị ka onye na-ekewapụ onwe ya, ya bụ, mgbaàmà ahụ bụ ntinye na npụta site na ọdụ ụgbọ mmiri ahọpụtara;
4. Jikọọ ATT mpụga ma jiri ya dị ka onye mgbasa ozi gosipụtara ọrụ nchọpụta ike gosipụtara.
Dị ka otu n'ime ihe ndị kasị mkpa mmiri, abụọ iberibe Samarium Cobalt diski magnetnye oghere magnetik di nkpa iji gbochie uzo jikọtara ferrite. N'ihi njirimara nke nguzogide corrosion magburu onwe ya na nkwụsi ike na-arụ ọrụ ruo ogo 350,, a na-eji SmCo5 na Sm2Co17 magnet mee ihe na ndị na-ekesa ma ọ bụ ndị na-ekewapụ.
Site na ntinye nke teknụzụ MIMO 5G buru ibu, oriri nke ndị na-ekesa ihe na ndị na-ekewapụ abawanyewo nke ọma, oghere ahịa ga-erukwa 4G ọtụtụ oge. Na oge 5G, ihe achọrọ ikike netwọk dị elu karịa nke 4G. MIMO Massive (Multiple-Input Multiple-Output) bụ otu n’ime teknụzụ ndị dị mkpa iji melite ikike netwọk. Iji kwado teknụzụ a, ọnụọgụ nke channelụ antenna 5G ga-arị elu nke ukwuu, ọnụọgụ nke channelụ antenna nke otu elekere ga-esi na ọwa 4 na ọwa 8 na 4G oge gaa na channelụ 64. Ugboro abụọ nke ọnụ ọgụgụ nke ọwa ga-edugakwa na mmụba dị ukwuu n'ọchịchọ maka ndị na-ekesa ihe na ndị na-ekewapụ onwe ha. N'otu oge ahụ, maka mkpa nke fechaa na miniaturization, achọrọ ihe ọhụrụ maka olu na ibu. Tụkwasị na nke ahụ, n'ihi mmelite nke ụda ọrụ na-arụ ọrụ, mgbaàmà mgbaàmà adịghị mma na nkwụnye ahụ buru ibu, na njupụta ntọala nke 5G ga-adị elu karịa nke 4G. Ya mere, na oge 5G, ojiji nke ndị na-ekesa ihe na ndị na-ekewapụ onwe ha, na mgbe ahụ, ihe ndị Samarium Cobalt ga-abawanye nke ukwuu.
Ugbu a ndị nrụpụta mgbasa ozi na nkewapụ n'ụwa gụnyere Skyworks na USA, SDP na Canada, TDK na Japan, HTD na China, wdg.
Post oge: Jun-10-2021